Amanqaku ka-Austin Rolling malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu UAustin Rolling
UAustin Rolling ngumseki kunye neCEO Ngaphandle. usomashishini wesizukulwana sesithathu. Uqale inkampani yakhe yokuqala, iwebhusayithi yefashoni, eneminyaka engama-20. Ubambe i-BA kwezonxibelelwano kwiYunivesithi yaseMpuma Michigan kunye ne-MBA yase-Texas A&M University. Uchithe uninzi lomsebenzi wakhe esebenza kwimpahla yabathengi kunye nendawo ye-IT kwintengiso yentengiso kunye nentengiso, ulawulo kunye nendima yophuhliso lweshishini.
NgoLwesibini, nge-10 kaDisemba ngo-2019 NgoLwesibini, nge-10 kaDisemba ngo-2019 UAustin Rolling
Njengokuba umhlaba usiya usiba kukunganyanzeliswa kwetekhnoloji- imithombo yeendaba zentlalo, ukuncokola ngevidiyo, njl. Ithuba lizibonakalise ngokwenyani. Umbono okhe weza wendalo, obonakalayo kwaye wabakho mhle kakhulu njengokucinga emva kwexesha uye wehliselwa kwimeko engafanelekanga, ebiza ixesha elininzi. Ngokwasemzimbeni ukuya phambi kwabantu ofuna ukwakha ubudlelwane nabo. Kubonakala ngathi umbono ocacileyo, kodwa inyani